'भारतीय दूतावासलाई इन्धन' - BBC News नेपाली
'भारतीय दूतावासलाई इन्धन'
7 अक्टोबर 2015
तस्वीर कपीराइट vijay rai
Image caption देशका थुप्रै ठाउँमा भारतले सिमा नाकामा गरेको अवरोधको विरोध भइरहेको छ।
नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले इन्धनको अभाव भएको भन्दै नेपाल आयल निगमसंग तेल माग गरेको खबर आएपछि त्यसको सांकेतिक अनि व्यंग्यात्मक शैलीमा विरोध गर्दै बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा थुप्रैले भारतीय दूतावासलाई तेल दिउँ भनेर टिप्पणी गरे।
यस विषयमा ट्वीटरमा चलाइएको अभियान केहीबेरमै संसारभर चर्चित बन्यो।
उक्त अभियान अन्तर्गत बुधबार करीब २ सय युवा ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरु पानीका बोतलमा भरिएका पेट्रोल बोकेर लैनचौरस्थित दूतावास अगाडि पुगेका थिए।
असल छिमेकीको नाताले हामी सहयोग गर्छो भन्दै प्रतीकात्मक शैलीमा उनीहरुले दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।
दूतावास बाहिर भेला भएका झन्डै दुईसय युवाहरु पानीको बोटलमा पेट्रोल लिएर बसेका थिए।
भित्रको एकजना प्रतिनिधिले किन आउनुभयो भनेर सोधेका थिए अनि हामीले तपाईँहरुलाई इन्धनको अभाव रहेछ त्यसैले दिन आएको भन्यौं। अनि उनीहरुले चाहिँ त्यो तिमीहरुकै मानिसहरुलाई बाँड भने
लेनिन बन्जाडे, एकजना ट्वीटरप्रयोगकर्ता
उनीहरुले 'तेल चाहिन्छ लैजाउ, स्वाभिमान दिँदैनौं', 'ब्याक अफ इण्डिया' जस्ता पर्चाहरु पनि बोकेका थिए।
त्यहाँ जम्मा भएर "कि त तेल देउ, नभए दिँदैनौं भन" भन्दै नारा लगाइरहँदा यता ट्वीटरमा पनि त्यससम्बन्धी फोटो र स्टेटसहरु उत्तिकै रुपमा प्रकाशित भइरहेका थिए।
त्यहाँ सहभागी एक युवाले भने, "भारतीय दूतावासले तेल मागेको सुनेर हामी यहाँ आएका हौं। मुहान थुनेर अनि धारो थाप्ने? हामी सँग नभए पनि हामी दिन सक्छौं है भन्ने सन्देश दिन हामी यहाँ आएको हो।"
असल छिमेकीको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ? भन्दै प्रतीकात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन #DonateOilToIndianEmbaasy अर्थात् भारतीय दूतावासलाई इन्धन दान गरौं भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाइएपछि दूतावासमा युवाहरु भेला भएका थिए।
उपस्थित कति युवाले रातो र चन्द्र सूर्य जस्ता गीतहरु पनि गाएका थिए।
उनीहरुले त्यसरी उभिएर प्रतीकात्मक सन्देश दिँदा बन्द कानहरु खुल्छन् कि भन्ने आश रहेको बताए।
उक्त क्षेत्रमा प्रहरीले दूतावासको गेट अगाडि मानिसहरुलाई भीड गर्न दिएको थिएन।
तर त्यहाँ उपस्थित दुईजना दूतावासभित्र छलफलका लागि गएका थिए।
तीनै मध्यका एक ट्वीटरप्रयोगकर्ता लेनिन बन्जाडेले भने, "भित्रको एकजना प्रतिनिधिले किन आउनुभयो भनेर सोधेका थिए अनि हामीले तपाईँहरुलाई इन्धनको अभाव रहेछ त्यसैले दिन आएको भन्यौं अनि उनीहरुले चाहिँ त्यो तिमीहरुकै मानिसहरुलाई बाँड भने।"
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनबाहेक खाद्यान्न अनि औषधिको पनि अभाव देखिन थालेको छ।